ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း နှင့် ချင်းတောင်တပ်ရင်း (Chin Hills Battalion) သမိုင်း – The Chinland Post
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း နှင့် ချင်းတောင်တပ်ရင်း (Chin Hills Battalion) သမိုင်း
Credit: Van Cung Lian
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသည် ၁၉၄၆ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလတွင် ဗမာပြည်အလုပ်အမှုဆောင်ကောင်စီသို့ ဒု-ဥက္ကဌအဖြစ်ခန်အပ်ခြင်းခံရပြီး ကာကွယ်ရေးနှင့်နိုင်ငံခြားရေးဌာန (Defence and External Affairs) အားတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခဲ့ရာမှ ထိုအချိန် ဗမာ့တပ်မတော်တွင် သက်တမ်းအရင့်ဆုံးနှင့် အတွေ့အကြုံအရှိဆုံးတပ်ရင်းဖြစ်သော ချင်းတောင်တပ်ရင်းအား တပ်ရင်းစိုက်ရာ မိတ္ထီလာမြို့သို့ သွားရောက် လည်ပတ်စစ်ဆေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
၁၉၄၅ ခုနှစ် ကန်ဒီသဘောတူစာချုပ်အရ ဗမာ့အမျိုးသားတပ်မတော် (Burma National Army) နှင့် ဗြိတိသျှတို့လက်အောက်တွင် အမှုထမ်းခဲ့သော တိုင်းရင်းသားစစ်တပ်များအား ပူးပေါင်းပြီး ခေတ်သစ်ဗမာ့တပ်မတော် ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြသည်။ ခေတ်သစ်ဗမာ့တပ်မတော်တွင် အရာရှိ ၂၀၀နှင့် အခြား စစ်သည် ၅၂၀၀ ပါဝင်သော သေနတ်ကိုင်တပ်ရင်း (၁၅) ခု ပါဝင်ခဲ့သည်။ ထို သေနတ်ကိုင်တပ်ရင်း ၁၅ခှုတွင် ဗမာ့သေနတ်ကိုင်တပ်ရင်း (၆) ခု၊ ချင်းသေနတ်ကိုင်တပ်ရင်း (၂) ခု၊ ကချင်သေနပ်ကိုင်တပ်ရင်း (၂) ခု၊ ကရင်သေနတ်ကိုင်တပ်ရင်း (၃) ခု၊ ဗမာ့တပ်မအမှတ် ၄ (ဂေါ်ရခါး) နှင့် ချင်းတောင်တပ်ရင်း (Chin Hills Battalion)တို့ ပါဝင်ခဲ့သည်။
Credit Van Cung Lian
ချင်းတောင်တပ်ရင်း (Chin Hills Battalion) နှင့် ချင်းသေနတ်ကိုင်တပ်ရင်း (Chin Rifle) နဲ့မတူပါဘူး။ ချင်းသေနတ်ကိုင်တပ်ရင်း (၁) နှင့် (၂) တို့သည် ၁၉၄၅ ကန်ဒီကွန်ဖရင်းအပြီးတွင် ဗမာ့တပ်မတ်ာသစ်အဖြစ် ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ချင်းတောင်တပ်ရင်းသည် ဗြိတိသျှတို့ ချင်းတောင်နယ်ကို အုပ်စိုးပြီးနောက် ၁၈၉၄ ခုနှစ်တွင် Military Police Battalion (စစ်ရဲတပ်ရင်း) အဖြစ် စတင်ခဲ့သည်။ ၁၈၉၄ ခုနှစ်မှ၍ ချင်းတောင်တန်း နှင့် နာဂတောင်တန်းတို့အတွက် လုံခြုံရေးအဖြစ်တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ပထမကမ္ဘာစစ်ကြီး ဖြစ်ပွားလာသောအခါ ဤတပ်ရင်းမှတပ်သား (၅၆) ဦးတို့သည် ဗြိတိသျှတို့ဘက်မှစစ်တိုက်ရန် Indian Division နှင့်အတူ ပြင်သစ်နိုင်ငံသို့ စစ်မှူထမ်းရင်း တပ်သား (၄၂) ဦးအသက်ပေးလှူခဲ့ရသည်။ ချင်းတောင်တပ်ရင်းထဲတွင် ဗြိတိသျှနှင့်အတူလိုက်ပါလာသော ဂေါရ်ခါး၊ ဂါဝါလီလူမျိုးများအပြင် ချင်းလူမျိုးများလည်း ပါဝင်ခဲ့သည်။ ၁၉၄၂ခုနှစ် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တွင်လည်း ဖက်ဆစ်ဂျပန်တို့အား တိုက်ခိုက်ရာတွင် အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ခဲ့သည်။ ဤတပ်ရင်းမှ တပ်ခွဲနှစ်ခွဲသည် ရှမ်းပြည်ရှိ ရွှေလီတံတားအား ကာကွယ်ရာတွင် ရန်သူများဝိုင်ရံခြင်းမှ ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့သည်။ ဗြိတိသျှတပ်ဖွဲ့များ အိနွိယသို့ဆုတ်ခွာရာတွင် ဂါန်ဂေါ-တမူး-အင်းဖာလ် လမ်းမကြီးအားလုံခြုံရေးယူခဲ့ကြပြီး မိုင်(၃၀၀) ကျော်ရှည်လျားသော ခံစစ်လိုင်းအား ခုခံသည့်တပ်ရင်းဖြစ်သည်။ ၁၉၄၅ တွင်လည်း ဖက်စစ်ဂျပန်တို့အား အမိချင်းပြည်မှ လည်းကောင်း၊ မင်းဘူးနယ်မှ ဧရာဝတီမြစ်ကမ်းတစ်လျောက် တံတားများ သိမ်းပိုက်ပြီး နောက်ဗြိတိသျှစစ်တပ်နှင့် မဟာမိတ်တပ်များအသုံးပြုရန်အတွက် ရှေ့တန်းမှ တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သည့် တပ်ရင်းဖြစ်သည်။ ဒုတိယအမ္ဘာစစ်အပြီး ခေတ်သစ်ဗမာ့တပ်မတော်ဖွဲ့စည်းသောအခါ တပ်ရင်း၏သမိုင်းအစဉ်အလာကို ထိန်းသိမ်းရင်း ချင်းတောင်တပ်ရင်း (Chin Hills Battalion) နာမည်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းခဲ့ကြသည်။ ထိုအချိန်ခေတ်သစ်ဗမာ့တပ်မတော်ထဲတွင် သက်တမ်းအရင့်ဆုံး နှင့် အစဉ်အလာအကြီးဆုံးတပ်ရင်း အဖြစ်ရပ်တည်ခဲ့သည်။ ၁၉၄၆ ခုနှစ်တွင် တပ်ရင်းသည်ရာထူးတိုးခြင်းခံရပြီး ချင်းတောင်တပ်ရင်း (Chin Hills Battalion) မှ ချင်းတောင်တပ်ရင်း-တင့်ကားဖျက်တပ်မဟာ (Chin Hills Battalion – Anti-Tank Regiment) အဖြစ်နာမည်ပြောင်းပြီး ၃ လက်မမော်တာ နှင့် ၈၇ လက်မ တင့်ကားဖျက်သေနတ်တို့ပိုင်ဆိုင်ခဲ့သည်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မတိုင်မီတွင် ဖလမ်းမြို့သည် ချင်းတောင်တပ်ရင်း၏ ရုံးစိုက်ရာမြိုးဖြစ်ပြီး၊ စစ်ကြီးပြီးဆုံးသည်နောက်ပိုင်း မိတ္ထီလာမြို့တွင်တပ်စွဲခဲ့ကြသည်။
ထိုသို့တပ်စွဲချိန်တွင် နိုင်ငံတော်အလုပ်အမှုဆောင်ကောင်စီမှ ဒု-ဥက္ကဌ၊ ကာကွယ်ရေးနှင့်နိုင်ငံခြား ရေးဝန်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းမှ တပ်ရင်းအားလာရောက်စစ်ဆေးရန်ဖြစ်သည်။ ချင်းတောင်တပ်ရင်းမှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း စစ်ဆေးခဲ့သော ပထမဆုံးတိုင်းရင်းသာတပ်ရင်း ဖြစ်သည်နှင့်အမျှ တပ်ရင်အရာရှိများနှင့်တပ်သားများသည် အလွန်ပင်စိတ်လှုပ်ရှားကြသည်။ တပ်ရင်းမှ တပ်သားများသည် ချီတက်ပွဲမြေပြင်တွင် တပ်ခွဲအလိုက်တန်းစီပြီး ဗိုလ်ချုပ်အား စောင့်ကြိုခဲ့ကြသည်။ ဗိုလ်ချုပ်သည် မော်တော်ယာဉ်တန်းဖြင့် ချေတက်ပွဲရင်ပြင်သို့ ၁၉၄၆ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၁၀ ရက်နေ့၊ နံနက် ၁၀နာရီ ၂၅ မိနစ်တွင် စိုက်ရောက်ခဲ့သည်။
ထို့နောက်ဗိုလ်ချုပ်သည် ဗြိတိသျှစစ်အရာရှိများသူ့နောက်လိုက်ပါရင်း တပ်ရင်း၏ အလေးပြုခြင်းကိုခံခဲ့ သည်။ နောက်ပြီး ဂုဏ်သရေရှိစွာတန်းစီကြသော တပ်ရင်းအားစစ်ဆေးခြင်းပြု လုပ်ခဲ့သည်။ ထိုသို့စစ်ဆေးရင်း တပ်သားတို့၏ တိုက်ပွဲအတွေ့အကြုံ နှင့် အမှုထမ်းသက်တမ်းများအား မေးမြန်းခြင်းပြုလုပ်ပြီးနောက် တပ်ခွဲအားလုံးမှ ချီတက်ပွဲမြေပြင်သို့ ချီတက်ပြီး ဘင်ခရာအသံများဖြင့် ဗိုလ်ချုပ်အားချီတက်အလေးပြုခဲ့ကြသည်။ ထို့နောက်တပ်ရင်းအရာရှိကြီးများ၊ ဗြိတိသျှအရာရှိကြီး များနှင့်အတူ အုပ်စုလိုက်ဓာတ်ပုံရိုက်ကြသည်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသည် တပ်ရင်းမှူး Major. Barnett Hutchinson နှင့် လိုက်ပါသူအခြားဗြတိသျှအရာရှိများနှင့် မတွေ့ဆုံဘဲ ချင်းဗိုလ်ကြီး Ngin Zam နှင့်နှစ်ဦးတည်းတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့သည်။ ချင်းဗိုလ်ကြီး Ngin Zam နှင့်လည်း နှစ်ဦးတည်း ဓာတ်ပုံရိုက်ကြသည်။
Subedar Major Ngin Zam (O.B, B.G.M) သည် ချင်းနယ်ချဲ့တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ခိုင်ကမ်း၏ တစ်ဦးတည်းသောသားဖြစ်ပြီး ချင်းတောင်တပ်ရင်းသို့ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ ဖက်ဆစ်ဂျပန်တော်လှန်ရေးတွင် ရွပ်ရွပ်ချွံချွံတိုက်ခိုက်စွမ်းဆောင်မှုကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံသူရဲကောင်းမှတ်တမ်းတင်တံဆိပ် (Burma Gallantry Medal) အား ဒီဇင်ဘာ ၁၆ ရက်နေ့ ၁၉၄၃ ခုနှစ်တွင် ချီမြှင့်ခံရသူဖြစ်သည်။ နောက်ပြီး ဗြိတိသျှအစိုးရမှ ချီမြှင့်သော Order of Burma (O.B) ခါ် ပြည်ထောင်စုစည်သူသင်္ဂဟ ကိုလည်းချီးမြှင့်ခြင်းခံရသူဖြစ်သည်။ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးတွင် ထိုဘွဲ့ဖြင့်ချီးမြှင့်ခံရသည် ပုဂိုလ် ၃၃ ဦးထဲတွင်တစ်ဦးအပါအ၀င်ဖြစ်သည်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသည် Subador Major Ngin Zam (OB, BGM) နှင့်အောက်ပါကဲ့သို့ ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း: ဗိုလ်ကြီး၊ ချင်းတောင်တပ်ရင်းထဲမှာ မျိုးနွယ်စုဘယ်လောက်ပါသလဲ။
Captain Ngin Zam: တပ်ရင်းထဲမှာ မျိုးနွယ်စု ၈ ခုပါဝင်ပါတယ်။ ဇာဟောင်၊ စီးယင်း၊ ဟားခါး၊ ခေါင်ဆိုင် (ထားဒို-ကူကီး)၊ ဟွာလ်ငိုး၊ စင်ထန်း၊ ကူမာယူနီ (Kumauni) နှင့် မြန်မာပြည်ဖွား ဂေါ်ခါးတို့ဖြစ်ကြပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း: ဟာတပ်ရင်းထဲမှာ မျိုးနွယ်စုတွေအများကြီးဘဲ။ ဘယ်လိုဆက်ဆံပြီး ဘယ်ဘာသာစကားသုံးစွဲကြပါသလဲ။
Captain Ngin Zam: အမိန့်ပေးတဲ့အခါကြတော့ အင်္ဂလိပ်လိုပေးတယ်။ တပ်ထဲမှာတော့ အူးရ်ဒူ (Urdu) ဘာသာစကား သုံးကြပါတယ်။ (Urdu ဘာသာစကား ပါကိစတန်နှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံအချို့ဒေသမှာသုံးစွဲသည့် ဘာသာစကားဖြစ်သည်။)
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း။ တပ်သားတွေ ဗမာလိုပြောတတ်ကြလား။ ဗမာစကားကော နားလည်ကြရဲ့လား။
Captain Ngin Zam: တပ်ရင်းအင်အားကတော့ ၈၀၀ ရှိပါတယ်။ အဲဒီထဲမှာမှ အယောက် ၆၀ လောက်ကသာ မြန်မာလိုပြောတတ်ကြတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း။ ဗမာပြည်မြေပြန့်ဒေသရဲ့ အပူဒဏ်ကို တပ်သားများ ခံနိုင်ကြရဲလား။
Captain Ngin Zam: အခုချိန်ကတော့ ဆောင်းဦးမို့လို့ ချင်းတောင်ရာသီးဥတုနှင့် သိပ်မကွာပါဘူးဆိုတော့ တပ်သားတွေခံနိုင်ပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း။ အခုတပ်သားဘယ်လောက် ဆေးရုံရောက်နေပါသလဲ။
Captain Ngin Zam: ၁၂ ယောက်ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ် စိုးရိမ်ရမယ့်အခြေမှာရှိတဲ့သူ မရှိပါဘူး။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း။ စစ်တပ်ထံမှ ရိက္ခာခွဲတမ်း (Rations) ရောကောင်းကောင်းရကြရဲ့လား။
Captain Ngin Zam: Yes Sir! ကျွန်တော်တို့လိုသမျှအားလုံး ထောက်ပံ့ရေးရုံ (Supply Depot) မှထောက်ပံ့ပေးပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း။ ဗိုလ်ကြီး ငါတို့ဗမာပြည်ကြီးဟာ နယ်ချဲ့ဗြိတိသျှလက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ပြီး မကြာခင် လွတ်လပ်ရေးရတော့မယ်။ ဗြိတိသျှအရာရှိတွေဟာ မကြာခင်ဗမာပြည်ကနေ ထွက်ခွာသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ တပ်မတော်ထဲမှာရှိတဲ့ တပ်ရင်းအားလုံးဟာ ငါတို့တစ်တွေကဘဲ ကွက်ကဲအုပ်ချုပ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့ကျွန်တော် ဒီချင်းတောင်တပ်ရင်းအား လာရောက်လည်ပတ်ခွင့်ရတာ အလွန်ဝမ်းမြောက် ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ အထူးသဖြင့် တပ်ရင်းရဲ့စည်ကမ်းရှိမှု၊ တပ်ရင်းရဲ့သမိုင်းအစဉ်အလာကို ထိန်သိမ်းမှု၊ တပ်ရင်းရဲ့တာဝန်သိတတ်မှု၊ သိစ္စာရှိမှု နှင့် ရိုးသားမှုများအားလုံး စဉ်ဆက်မပျက်ထိန်းသိမ်းရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လွတ်လပ်တဲ့ ဗမာပြည် ဖွိ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်အတွက် တာဝန်သိတတ်၊ ရိုးသားပြီး သစ္စရှိတဲ့ ဒီတပ်ရင်းမျိုး လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ စည်းကမ်းနှင့်သစ္စာမရှိတဲ့ တပ်မတော်ဟာ နိုင်ငံအတွက် အသုံးဝင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါ့အပြင်တိုက်ပွဲလည်း ဆင်နွှဲနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး၊ ငါတို့တစ်တွေ စည်းစည်းလုံးလုံး ကြိုးစားအလုပ်လုပ်ဖို့လိုပါတယ်။ တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက်အပေါ် ယုံကြည်မှုရှိဖို့ လိုပါတယ်။ နိုင်ငံတော်အတွက် အားလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီး သင့်မြတ်စွာနေထိုင်ကြဖို့ လိုပါတယ်။ အဲဒီလိုစည်းလုံးမှုမရှိဘဲ တစ်ယေက်တစ်ပေါက် လှုပ်ရှားကြမယ်ဆိုရင် လွပ်လပ်ရေးဆိုတဲ့အနှစ် သာရဟာ ငါတို့တစ်တွေ ခံစားကြရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ တို့တစ်တွေ အတူစဉ်းစား အလုပ်လုပ်ပြီး တပ်ရင်း၏ ဆုံးခန်းသည့်တိုင် တိုက်ခိုက်သည့် စိတ်စွမ်းပကား နှင့် ရဲရင်တဲ့အားမာန်ကို လုံးဝထိန်းသိမ်းရမယ်။ တပ်ရင်း၏ သမိုင်းအစဉ်အလာကိုလည်း လုံးဝထိန်းသိမ်းဖို့လိုပါတယ်။ နောက်နောင်အချိန်ရလို့ရှိရင် အလည်ပြန်လာခဲ့မယ်။ ဒီတပ်ရင်းရဲ့ စည်းကမ်းရှိပြီး ဖြောင့်မတ်တဲ့စစ်သား နှင့် အရာရှိကြီးများ တွေ့ရတာ အလွန်ပင် ၀မ်းမြောက်ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။
နောက်ပြီးဗိုလ်ချုပ်ဟာ ညနေ ၄နာရီ ၁၅ မိနစ်အချိန်တွင် တပ်ရင်းမှပြန်လည်ထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသည် ပင်လုံစာချုပ်တွင် ချင်းကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးဖြစ်သော ဦးဝမ်ကိုဟောနှင့် တွေ့ဆုံသောအခါ သူ ဗိုလ်ကြီး Ngin Zam နှင့်တွေ့ဆုံတဲ့အကြောင်း၊ သူဟာဗမာလိုကောင်း ကောင်းပြောတတ်တယ်၊ ဒါပေမယ့် တပ်ရင်းဘာသာစကားအဖြစ် Urdu သုံးစွဲတဲ့အပေါ် ဗိုလ်ချုပ်ဟာစိတ်မျက်မိကြောင်း၊ ဗိုလ်ချုပ်သည် ချင်းတောင်တပ်ရင်းအား အထင်ကြီးသည့်အကြောင်း များပြန်လည်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်ကတိပေးခဲ့တဲ့ ဒုတိယအကြိမ် အလည်အပတ်ဟာ မဖြစ်မြောက်ခဲ့ရှာပါဘူး။ ၁၉၄၇ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက်နေ့မှာ အခြားအာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီး များနှင့်အတူ တိုင်ပြည်နှင့်လူမျိုးအတွက် အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း စစ်ဆေးခဲ့တဲ့ တစ်ခုတည်းသော ချင်းတပ်ရင်းဖြစ်သည့် ချင်းတောင်တပ်ရင်း-တင့်ကားဖျက်တပ်မဟာ ဟာလည်း ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလာရောက်စစ်ဆေးသည် တစ်ခုတည်းသော တပ်ရင်းအဖြစ် သမိုင်းတွင်ခဲ့ လေသည်။
ချင်းတောင်တပ်ရင်း-တင့်ကားဖျက်တပ်မဟာ သည်သူတို့သမိုင်းအစဉ်အလာကို ထိန်းသိမ်းရင်း နိုင်ငံတော်ကြီးတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး နှင့် ပြည်ထောင်စုဗမာနိုင်ငံတော်ကြီး မပြိုကွဲရေးအတွက် ရွပ်ရွပ်ချွံချွံဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ၁၉၄၆ခုနှစ်တွင်မူ မင်းဘူး နှင် မကွေးနယ်များ တွင် ခိုးသား၊ ဓမြတို့အား နှိမ်နင်းနိင်ခဲ့သည်။ ၁၉၄၇ တွင်မူ ကျိုင်းတုံနယ်တွင် တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြသည်။ ၁၉၄၈ တွင်လည်း ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ တို့အားနိမ်နင်းရာတွင် နာမည်ကျော်ကြားသည့်တပ်ရင်းဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် ပုဂံ၊ ညောင်ဦးအနီးရှိ ငါ့သရောက်တိုက်ပွဲတွင် ရန်သူ (၆၀) ကျဆုံးပြီး၊ အယောက်(၈၀) အားဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့သည်။
၁၉၄၈ခုနှစ်တွင် ဗမာပြည်လွတ်လပ်ရေး ရရှိလာသောအခါ ဗြိတိသျှအရာရှိများ နေရပ်သို့ပြန်သွားကြပြီး ဒု-ဗိုလ်မှူးကြီး Lian Cin Zam အားတပ်ရင်းမှူးအဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်းခံခဲ့ရသည်။ ၁၉၄၉ ခုနှစ်သည် ဤတပ်ရင်းအတွက် အကျအဆုံးများခဲ့သည့် တိုက်ပွဲများနှင့် ရင်ဆိုင်ခဲ့ကြရသည်။ ၁၉၄၉ ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလ (၁၅) ရက်နေ့တွင် ကယားပြည်နယ်မှ ပဒေါင်းတို့ရေးအခင်းကြောင့် တစ်တပ်ရင်းလုံးနီးပါး လွိုင်ကော်သို့ တောင်ကြီးမှတဆင့် ချီတက်ရန် မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှ အမိန့်ထွက်လာသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက် တပ်ရင်းမှူး ဒု-ဗိုလ်မှူးကြီး Lian Cin Zam ကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်ပြီး လွိုင်ကော်သို့တပ်ချပြီးနောက်၊ တပ်ခွဲတစ်ခွဲသည် ကယားပြည်နယ်၊ ဖာလိုင်ရွာသို့ ချစ်ကြည်ရေးခရီးစဉ်အတွက် ချီတက်စဉ် Karen National Defence Organization (KNDO) တို့၏ ခြုံခိုတိုက်ခိုက်ခြင်းကိုခံခဲ့ရသည်။ ထိုတိုက်ပွဲတွင် အရာရှိနှစ်ဦးအပါအ၀င် (၂၉) ဦး ကျဆုံးခဲ့ရပြီး (၄၉) ဦးအဖမ်းခံရသည်။ အဖမ်းခံရသူများသည် ၀န်ကြီးချုပ်ဦးနုနှင့် ဗိုလ်မှူးချုပ်စောကြာဒိုးတို့၏ ဆောင်ရွက်ချက်ကြောင့် ပြန်လည်လွတ်မြောက်သော်လည်း သူတို့၏ လက်နက်များမှာမူ သိမ်းဆည်းခြင်းခံခဲ့ရသည်။
၁၉၄၉ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် ပြည်တွင်းစစ်မီးတောက်လောင်လာသောအခါ ဗိုလ်နော်ဆိုင်းခေါင်း ဆောင်သော ကချင်တပ် နှင့် KNDO တို့သည် မိတ္ထီလာမြို့ကို ဖေဖော်ဝါရီ (၂၀) ရက်တွင် သိမ်းပိုက် ခဲ့ရာ၌ ဒုဗိုလ်မှူးကြီး Lian Cin Zam သည် မိတ္ထီလာမြို့တွင် KNDO တို့၏ အကျယ်ချုပ်ခြင်းခံရသည်။ ဒုတပ်ရင်းမှူး ဗိုလ်မှူး L.W.C Hitch Cock (အင်္ဂလိပ်-ဗမာကပြား) ဦးဆောင်သော တပ်ခွဲနှစ်ခွဲသည် သာစည်မြို့တွင်ပင် သောင်တင်ခဲ့ရပြီး KNDO တပ်သား (၃၀၀၀) ကျော်တို့၏ စိန်ပြောင်းဒဏ်ကို နေ့တိုင်းခံနေရသည်။ သာစည်မြို့တွင် ချင်းတောင်တပ်ရင်းမှ တပ်ခွဲ နှစ်ခွဲ၊ ဗမာ့တပ်ရင်း (၆) မှ ဗိုလ်မှူးတင်မောင်၏တပ်ခွဲ နှစ်ခွဲနှင့် ခြေလျင်တပ်ရင်း (၄) မှ ဂေါ်ရခါးတပ်ခွဲ (၁) ခွဲဖြင့် သာစည်မြို့တွင် KNDO တပ်အင်အား (၃၀၀၀) ကျော်တို့အားခုခံခဲ့ကြသည်။ KNDO တို့၏ထိုးစစ်ဆင်မှုအား အကြိမ်ကြိမ်တွန်းလှန်နိုင်ခဲ့ကြသည်။ ၁၉၄၉ ခုနှစ် ဧပြီ (၅) ရက်နေ့တွင် စစ်ကူအဖြစ် ချင်းတပ်ခွဲတစ်ခွဲ ရောက်ရှိလာသည်။ ဧပြီ (၇) ရက်နေ့တွင် KNDO တို့သည် သာစည်မြို့အား နောက်ဆုံးအကြိမ် ထိုးစစ်ဆင်ပြီးနောက် သာစည်မြို့မှဆုတ်ခွာသွားကြပြီး၊ ဧပြီ ၇ ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် နောက်မှရောက်ရှိ လာသော ချင်းတပ်ခွဲ နှင့် သာစည်မြို့အား (၂) လကြာခံထားသော စစ်သားများပျော်မြုးစွာ တွေ့ဆုံခဲ့ကြသည်။ သာစည်တိုက်ပွဲတွင် ချင်းတပ်ခွဲမှ (၃၉) ဦး ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုငငံတော်ကို ကာကွယ်ရင်းအသက်ပေးလှူခဲ့ကြသည်။ ထို့နောက် မိတ္ထီလာရှိ ဒုဗိုလ်မှူးကြီး Lian Cin Zam ထံမှ ဆက်သား ရောက်ရှိလာပြီး မိတ္ထီလာမှ KNDO တို့သည်လည်းဆုတ်ခွာသွားပြီဖြစ်ကြောင်း သတင်းရသောအခါ ဗိုလ်မှူး Hitch Cock ခေါင်းဆောင်သော ချင်းတပ်ခွဲတို့သည် မိတ္ထီလာသို့ချီတက်ခဲ့ကြသည်။ ဗိုလ်မှူးကြီးတင်မောင် သည်သူ့စာအုပ် တိုင်ပြည်ကနုနု၊ မုန်တိုင်းကထန်ထန်ထဲတွင် “ဂေါ်ရခါး နှင့် ချင်းရဲဘော်တို့၏ စိတ်ဓာတ်နှင့် သစ္စာရှိမှုကို ကျွန်တော်သည် ဘယ်သောအခါမှ မေ့မည်မဟုတ်၊ ကျွန်တော်သည်အမြဲသတိယနေမည်ဖြစ်သည်” ဟုရေးသားခဲ့သည်။
ဗိုလ်နော်ဆိုင်းခေါင်းဆောင်သော ကချင်တပ်နှင့် KNDO တပ်တို့သည် တောင်ငူတွင် ပြန်လည်စုစည်းကြပြီး၊ ထိုမှတဆင့် ရန်ကုန်သို့ချီတက်လာခဲ့ရာ ပဲခူးမြို့မြောက်ဘက်ရှိ ဒိုက်ဦးအားသိမ်းပိုက်လိုက်ကြသည်။ ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်းသည် မိတ္ထီလာသို့ အရေးပေါ် သွားရောက်ခဲ့ပြီး၊ ဒုဗိုလ်မှူးကြီးတင်ဦး ဦးဆောင်သည့် ဗမာ့သေနတ်ကိုင်တပ်ရင်း (၆) မှ တပ်ခွဲ (၂) ခုအား ဒုဗိုလ်မှူးကြီး Lian Cin Zam ဦးဆောင်သည့် ချင်းတောင်တင့်ကားဖျက်တပ်ရင်းသို့ ပူးပေါင်းစေခဲ့သည်။ ထို့နောက် ၁၉၄၉ခုနှစ် ဇွန်လ ဒုတိယအပတ်တွင် ချင်းတောင်တင့်ကားဖျက်တပ်ရင်းအား မိတ္ထီလာမှ မင်္ဂလာဒုံသို့ လေယာဉ်ဖြင့် အကြိမ် (၃၀) သယ်ယူပို့ဆောင်ခဲ့သည်။ မင်္ဂလာဒုံမှ ဒိုက်ဦးသို့ စစ်တပ်ကားဖြင့် သွားရောက်ခဲ့ပြီး၊ ဗိုလ်နော်ဆိုင်းတပ်နှင့် KNDO စစ်သား (၁၀၀၀) ခန့်တို့နှင့် ကတုတ်ဘုရားကြီး နှင့် ဒိုက်ဦးတို့တွင် မျက်နှာချင်းဆိုင် အပြင်းအထန်တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ဤသို့ဖြင့် ချင်းတောင်တင့်ကားဖျက်တပ်ရင်း KNDO တပ်ဖွဲ့အား ရန်ကုန်သို့ မရောက်အောင် ဟန့်တားခဲ့သည့် တပ်ရင်းဖြစ်သည်။ ဤတိုက်ပွဲတွင် ချင်းတောင်တပ်ရင်း-တင့်ကားဖျက်တပ်မဟာ နှင့် ဗမာ့ရင်းမှ တပ်သားနှင့် အရာရှိပေါင်း (၂၂၅) ကျရှုံး၊ ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။ ဒု-ဗိုလ်မှူးကြီးဟရန်ထီးယိုး ဦးဆောင်ခဲ့သည့် ချင်းသေနတ်ကိုင်တပ်ရင်း (၁) သည်လည်း အင်းစိန်စစ်မျက်နှာတွင် တိုက်ပွဲပေါင်းများစွာနှင့် ရင်ဆိုင်ပြီး KNDO တို့အား အင်းစိန်မှမောင်းထုတ်ရာတွင်အဓိကအခန်းကဏ္ဍ မှပါင်ခဲ့သည်။ တပ်ရင်းမှူးဟရန်ထီးယိုးမှာ မှောဘီတိုက်ပွဲတွင် နိုင်ငံတော်အတွက် အသက်ပေးလှူခဲ့ရသည်။ ဒု-ဗိုလ်မှူးကြီး ဆွန်ခိုပေါင်ဦးဆောင်သော ချင်းသေနတ်ကိုင်တပ်ရင်း (၂) သည်လည်း မော်လမြိုင်၊ မုတ္တမ၊ သထုံ နှင့် တနင်္သာရီဒေသတို့တွင် KNDO နှင့် မွန်ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် (MNDO) တို့အားတိုက်ထုတ်ရာတွင်လည်းကောင်း အင်းစိန်တိုက်ပွဲတွင်လည်းကောင်း သက်စွန့်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သည့် တပ်ရင်းဖြစ်သည်။ ဗမာပြည်ထောင်စုကြီးပြိုကွဲမည့်ရန်မှ ကာကွယ်ရာတွင် ချင်းတပ်ရင်းများသည် မိမိအသက်ကို ပဓာနမထားဘဲ ပြည်ထောင်စုကြီးတည်မြဲရေးအတွက် ရွပ်ရွပ်ချွံချွံတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြသည်။ ဗမာပြည်စစ်ရုံးချုပ်မှတ်တမ်းအရ ၁၉၄၈ ဇန်န၀ါရီလမှ ၁၉၅၀ ခုနှစ်အထိ တိုင်ပြည်အတွက် ချင်းတပ်ရင်းများမှ ၁၇၇ ဦးကျရှုံး၊ ၁၅၃ ဒဏ်ရာရ၊ ၁၆ဦး ပျောက်ဆုံးခဲ့သည်။
ချင်းတောင်တင့်ကားဖျက်တပ်ရင်းသည် ၁၉၄၉ နှောင်းပိုင်းတွင် ၅၅နှစ်ကြာထိန်းသိမ်းလာခဲ့သည့် ချင်းတောင်တပ်ရင်း မှ ချင်းသေနတ်ကိုင်တပ်ရင်း (၃) အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲရန် စစ်ရုံးချုပ်မှ စီစဉ်ရာတွင်လည်း ဤတပ်ရင်းမှအပြင်းအထန်ကန်ကွက်ခဲ့ကြသည်။ တပ်ရင်းမှူး Lian Cin Zam က ကန့်ကွက်စာအမှတ် ၃၈၁၊၀-၁၊ သြဂုတ်လ (၄) ရက် ၁၉၄၉ နေ့စွဲတပ် စာတွင် နာမည်ပြောင်းလဲခြင်းနှင်ပတ်သက်၍ စစ်ရေးရုံးချုပ်သို့ တပ်ရင်းအားလုံးကိုယ်စား အပြင်းအထန် ကန်ကွက်ခဲ့သည်။ ထိုစာတွင် တပ်ရင်းမှ စစ်သည်၊ အရာရှိများအားလုံးက နာမည်ပြောင်းလဲခြင်းကို ကန့်ကွက်ကြောင်း၊ တပ်ရင်းသည် ဗမာ့တပ်မတော်တွင် သက်တမ်းအရင့်ဆုံးဖြစ်ကြောင်း၊ တပ်ရင်းအမည်မှာ ဗြိတိသျှတို့ခေတ်မှ ရရှိသော နာမည်ဖြစ်သော်လည်း တပ်ရင်းသည် ပြည်ထောင်စု ပေါ်တွင် သာသစ္စာရှိစွာအမှုထမ်း တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြောင်း၊ ဤတပ်ရင်းသည် တပ်ရင်း၏ (၅၅) နှစ်ကြာသမိုင်းအစဉ်အလာကို ဆက်လက် ထိန်းသိမ်းလိုကြောင်း စသည်ဖြင့် ကန့်ကွက်သော်လည်း မအောင်မြင်ခဲ့ပေ။ ချင်းတောင်သေနတ်ကိုင် တပ်ရင်းသည် သူ၏ကြီးမားလှသော (၅၅) နှစ်ကြာ သမိုင်းအစဉ်အစဉ်အလားအား ဖျက်သိမ်းခြင်းခံရပြီး ချင်းသေနတ်ကိုင်တပ်ရင်း (၃) ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းမှာကြားခဲ့သည့် တပ်ရင်း၏ ကြီးမားတဲ့သမိုင်းအစဉ်အလာကို ထိန်းသိမ်းရမည်ဆို့သည် မှာကြားချက်အား တပ်ရင်းမှတပ်သားနှင့်အရာရှိကြီးများ မြင်ယောင်မိကြသည်။ ဗိုလ်ချုပ်သာရှိခဲ့လျင် ဆိုတဲ့အတွေးများဝင်လာမိသည်။ တပ်ရင်မှူး Lian Cin Zam သည်လည်း ၁၉၅၂ ခုနှစ် မတ်လ (၂၇) တွင် ဗမာ့တပ်ရင်း (၁၅) သို့ပြောင်းရွှေ့တာဝန်ယူစေခဲ့သည်။ တပ်ရင်းမှူး Lian Cin Zam သည် ၁၉၅၆ တွင် စစ်ဆေးရုံ၌ သေဆုံးခဲ့ရပြီး သူ၏ရုပ်ကလာပ်အား အစိုးရပိုင်လေကြောင်းများမှ ကလေးမြို့သို့ သယ်ဆောင်ခွင့်မရဘဲ၊ သူ့မိသားစုနှင့် ဗမာ့ရေနံကုမ္ပဏီတို့၏ စီစဉ်မှုဖြင့် ဗမာ့ရေနံကုမ္ပဏီပိုင်လေယာဉ်ဖြင့် သယ်ဆောင်ခဲ့ရသည်။ နိုင်ငံတော်အတွက် အသက်ကို ပဓာနမထားဘဲ တိုင်းပြည်နှင့်လူမျိုးအတွက် ရွပ်ရွပ်ချွံချွံတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သည့် သူရဲကောင်းတစ်ဦးဖြစ်သော်လည်း သူကွယ်လွန်သည့်အချိန်တွင်မူ လျစ်လျူရှုခြင်းခံခဲ့ရသည်။
တစ်ချန်က ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း လေးစားခြင်းခံခဲ့ရသည့် တပ်ရင်း၊ ဒီလိုတပ်ရင်းမျိုးတိုင်းပြည် ကာကွယ်ရန်သာမက၊ တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်လိုအပ်သည်ဟု ဗိုလ်ချုပ်မှအတင်ကြီးခဲ့သည့်တပ်ရင်း၊ တစ်ချိန်ကဗမာ့တပ်မတော်ထဲတွင် သက်တမ်းအရင့်ဆုံးတပ်ရင်း၊ အတွေ့အကြုံအရှိဆုံး တပ်ရင်း၊ ကြီးမားတဲ့သမိုင်းအစဉ်အလာကို ပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ တပ်ရင်းဟာ ယနေ့အချိန်တွင်မူသမိုင်းအဖြစ်သာ ကျန်ရစ်တော့ရှာသည်။
1) The Chin Hills Battalion Manuscripts, The British Library, London. BL Reference MSS EUR E250
2) The History of Chin Hills Battalion by Major (later Lt.Col) A.C Moore, the then Chin Hills Bn Commanding Officer
3) Chin Hills Battalion files supplied to me by Lt.Col. P.C Moore (son of Lt.Col A. C. Moore)
4) ဖလမ်းအဆင့်မြင့်တန်းကျောင်း (၇၅) နှစ်ပြည့်မဂ္ဂဇင်း မှ Bhomu Manv Pu ရေးသားသော Bogoke Aung San inspects the Chin Rifles ဆောင်းပါး
5) The Outbreak of the KNDO and MNDO article by Lt.Col Thian Khaw Khai, published in Yangon Siyin Baptist Church, Silver Jubilee Magazine (Supplied to me by Pu Thang Za Dal, Hamburg. Germany)
6) Building The Tatmadaw: Myanmar Armed Forces since 1948 by Maung Maung Aye
7) The Saturday Born by Ex. Burma Prime Minister U Nu
8) ဗိုလ်မှူးကြီးတင်မောင်ရေးသားသော တိုင်ပြည်ကနုနု၊ မုန်တိုင်းကထန်ထန်
Previous Hakha Cozah Mucu Thlang Ah Inn Pakhat Cu A Cim Caah Mi An Um Ngam Ti Lo
Next Kalay University Ca Ah Chin Ram Vawlei Tahnak An Tuahmi Zatlang Bu (30) Leng Nih An Doh